Your guide to Hair care - Yangon Thu Michelle Articles
Articles Dec 04, 2021
မီရှဲဆံပင်က အခုဆို ခါးလယ်ကျော်လို့ တင်ပါးတစ်ဝက်အရှည်ရောက်နေပြီ။ ဆံပင်ကို ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့က ကောက်ထားတာ နောက်ဆုံးပဲ။ ဆံပင်ကို ရှစ်လ တစ်ခါဆေးဆိုးတယ်။ This is all about your guide to hair care journey.
ရှည်တဲ့ဆံပင်ကိုမှ ဆေးထိထားတော့ ဆံပင်အဖျားတွေဆို ငြိပြီး ရှင်းရခက်တာ ခဏခဏကြုံတယ်။ ဒီကြားထဲကို Stress ကြောင့်ရော၊ ကိုဗစ်နဲ့ရောပြီး ကျွတ်တာမှ အထွေးလိုက်။ အဲ့ဒီကြားထဲကမှ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာဖို့၊ ဆံပင်အရှည်ကို အချိန်အကြာကြီး ထားနိုင်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲ ပြောပြချင်ပါတယ် ….
တစ်ပုံချင်းစီသာ ကြည့်ပေးနော် …။
ဆံပင်က ခါးကျော်လာတဲ့အခါ မစည်းပဲ ထားထားရင် ထိုင်ရင် ဖိမိတာ၊ ဆံပင်လေတိုက်ရင် ဘေးလူကိုထိတာ၊ လျှောက်လမ်းတစ်ခုလုံးက ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့မဆို ငြိပြီး ခဏခဏ ကျွတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ….
ညဘက်မအိပ်ခင်/ခေါင်းမလျှော်ခင်/ ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်ဆို တြိရတနဖြန်းထားလိုက်ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့ဗူး ဒီအတိုင်းပဲဆို သုံးရခက်လို့ စပရေးဘူး အလွတ်၂၅၀ မီလီဘူးနဲ့ဝယ်ထည့်ပြီး ဖြည့်သုံးပါတယ်။ ၂၀၀ မီလီဘူးနဲ့ဆို မူရင်းဘူးဆိုဒ်ထက် သေးပြီး အမြဲဆေးရည်ပိုနေလို့ ဘူးကြီးဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ တြိရတနက တစ်ဘူးကို ၁၂၀၀-၁၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ပစ္စည်းပြတ်တတ်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ရှာဝယ်ရတာ စိတ်မရှည်လို့ ဒိုင်ကနေ ၂၄ လုံးတစ်ကဒ်မှာလိုက်တာ ၂ နှစ်ရှိပြီး အခုထိဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ အိမ်အရောက်ဒယ်လီ ဖရီးနဲ့ စျေးလည်း ပိုသက်သာတယ်။
ဆံပင်ပုံမှန်ထက်ပိုကျွတ်တယ်ခံစားမိရင် Kanimonoto ကိုဖြန်းပါတယ်။ သူရဲ့ စပရေးဘူး သပ်သပ်ဝယ်ပြီး ထည့်ဖြန်းမှ သုံးရလွယ်တယ်။ ဆက်တိုက် တစ်ပတ်လောက်သုံးပြီးရင် အမွေးနုလေးတွေ အများကြီးထွက်လာတယ်။ မီရှဲခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်သုံးတယ်။ ဆံပင်ကျွတ် သက်သာတာလည်း သိသာတယ်။
မကောင်းတာက တစ်ဘူး ၂၈၀၀၀ ကနေ သုံးသောင်းကျော်တယ်။ ခဏခဏဖြန်းရင် ကုန်တာမြန်လို့ တြိရတနနဲ့ အလှည့်ကျသုံးပေးတယ်။ နှစ်ခုလုံး တစ်ခါတည်းသုံးမိရင် ဦးရေစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တယ်။ Nadi Yoon Htike ဆီကနေ ဝယ်လို့ရတယ်။
ခေါင်းမလျှော်ခင်ဆို အုန်းဆီ သို့ သံလွင်ဆီကို အမြဲလိမ်းပြီးမှ ခေါင်းလျှော်တယ်။ ဆံပင်အရင်းကို လိမ်းရင် ဆီဝပြီး ပိုကျွတ်တတ်လို့ အဖျားပဲ လိမ်းရပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် ဆံပင် မခြောက်တခြောက်အချိန်မှာ hair-coat လိမ်း။ ပြီးမှ ဆံပင်ခြောက်အောင်မှုတ်ရင် ဆံပင်သားပြောင်လတ်နေရော …။ hair-coat က ကြုံရာသုံးတာများတယ်။ ကပ်စေးကပ်စေး မဖြစ်ရင် ရပြီ။
ခေါင်းလျှော်ရည်က ဆံပင်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတယ်။ ကောင်းလဲကောင်းရမယ်၊ ဘက်ဂျက်လည်းကြည့်ရသေးတယ်နော့။
မီရှဲ ပုံမှန်သုံးနေတာဆို Dove ရှိတယ်။ ဆံပင်အပူချောင်းနဲ့ ကောက်ထားမိရင် သုံးတယ်။ အဖျားခြောက်တာ နည်းသွားတယ်။ ပျော့ဆေးနဲ့ တွဲသုံးရင် ပိုသိသာတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်တာများတယ် ခံစားမိရင် Yves Rocher ထဲက ဆံပင်အုံထူစေတဲ့ Volume & Matiere အမျိုးအစားရွေးသုံးတယ်။ လျှော်ပြီးရင် အုံထူသလို အရင်းနားက ပွပွလေး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီ ဒီဇင်ဘာဆို sale ချရင် ၁၁၀၀၀ ကနေ ၁၃၅၀၀ လောက် စျေးရှိတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်ဆို ၁၈၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။
Zumi က စမ်းသုံးတာမကြာသေးဘူး။ ခေါင်းတစ်ပတ်လောက် မလျှော်မိတဲ့အချိန် ဂျီးထူနေတဲ့အချိန် လျှော်မိရင် ခေါင်းတော်တော်ပေါ့တာ။ ဆံပင်လည်း အရမ်းမကျွတ်ဘူး။ စျေးလည်း ၁၈၀၀၀ လောက်ပဲ။
Kanimonoto shampoo နဲ့ ပျော့ဆေးကတော့ တစ်ခါတစ်လေမှသုံးဖြစ်တယ်။ ဆေးနံ့ရလို့။ ဒါပေမဲ့ ကိုဗစ်ဖြစ်အပြီး ဆံပင်ကျွတ်ချိန်တုန်းက သူနဲ့မှ သက်သာသွားတယ်။ သိပ်မကျွတ်တော့တဲ့အချိန်ကျမှ အပေါ်က တံဆိပ်တွေ ပြန်ပြောင်းသုံးတာ။ စျေးက နှစ်ဘူးပေါင်း သုံးသောင်းကျော်ဖြစ်မယ်။ စျေးက ဘောက်ချာပြန်ကြည့်ရမယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။
ဘာမှမဟုတ်ဘူး ထင်ရပေမဲ့ ကိုယ်ပတ်တဘတ်ကို ခေါင်းသုတ်ရင် ဆံပင်ငြိတာ ပိုဆိုးတယ်။ ရေလဲ ထင်သလောက်မစုပ်တော့ အကြာကြီး ခေါင်းပေါင်းမိရင် ဇတ်ညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။
ဒီရေစုပ်တဘတ်က ရေစုပ်မြန်တော့ ခေါင်းလျှော်ပြီး ပေါင်းထား၊ ရေသုတ် အဝတ်လဲ lotion လိမ်း ဘာညာ လုပ်ပြီးချိန်လောက်ဆို ရေတစ်ဝက်လောက်ခြောက်နေပြီ။
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေစုပ်တဘတ်လို့ရိုက်ရှာပြီး ဝယ်ရင်တောင်ရတယ်။ စျေးက လက်ကားစျေး ၁၅၀၀ ကနေ လက်လီစျေး ၃၀၀၀ ထိရောင်းကြတယ်။ စျေးအရမ်းကြီးတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ သိပ်မကွာဘူး။ စျေးပေါတာပဲဝယ် …။
ဘီးကတော့ Tangle Teezer တံဆိပ်ကိုတော့ ဘယ်ဘီးကမှ မမှီတာပါ။ လက်ကိုင်အရှည်နဲ့ဟာဆို ဆံပင်ရှင်းရင် မပါမဖြစ်ပဲ။ ရှင်းတဲ့အခါ တခြားဘီးတွေလို အရင်းက ဆံပင် တစ်ပင်ချင်းတင်းပြီးနာတဲ့ ခံစားချက်မရဘူး။ မိတ်ကပ်ဆရာဆီသွားရင်တောင် ယူသွားရတဲ့ ဘီးပါ။ ပန်းဆီရောင်ကတော့ ခရီးသွားရင် ထည့်သွားတယ်။
စျေးများတယ် ၂၈၀၀၀ ဆိုတာ ရောင်းသမျှထဲ အနည်းဆုံးပဲ။ ၂၈၀၀၀ – ၃၃၀၀၀ ဝန်းကျင်ရောင်းကျတယ်။ ဆံပင်ရှင်းရလွယ်တယ်၊ တစ်ခါပဲ ဝယ်စရာလိုတယ်လို့ တွေးပြီး ဝယ်ခဲ့တာပဲ။
Sugar Bear Hair က ဆံပင်အုံထူလာတာ ရက်ပိုင်းအတွင်း သိသာတယ်၊ စျေးများတယ်၊ အဆီဖုထွက်လာတယ်၊ ရေများများသောက်ပေးရတယ်၊ စားတဲ့အခါ အရမ်းချိုတယ် ခံစားရတယ် ( မီရှဲအချိုသိပ်မစားလို့)
Soulmate က နှစ်ပတ်လောက်ဆက်တိုက်သောက်မှ သိသာတယ်၊ စျေးသင့်တယ်၊ အဆီဖု မထွက်ဘူး၊ အချိုမကဲဘူး (ချိုတာတော့ ချိုတုန်းပဲ)
ဒီထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ချင်ရင်
Hair Dryer အမျိုးအစားကောင်းတာသုံးပါ။ ရလဒ်ကွာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်လျှော်ဆိုင်တွေနဲ့ အိမ်မှာလျှော်တာ ကွာတာပါ။ မီရှဲက dyson တံဆိပ်သုံးပါတယ်။ ရေရှည်ခံတာကော၊ ဆံပင်ခြောက်ချိန်မြန်တာကော သဘောကျလို့ ဝယ်လိုက်တာပါ။
ပိုးသားခေါင်းအုံးစွပ် သုံးပါ။ မနက်နိုးလာရင် ဆံပင်ငြိပြီးလုံးမနေပဲ ရှင်းရသက်သာပါတယ်။
အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လဲ အလျင်းသင့်သလို အသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။ သဘောကျတယ်ဆို မျှဝေပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော် ….။